Tsamba yetenani, Nyani yeAnti-cut, Magirovus anotengesa mufekitari mukuru - China Boegger
Uri pano:Musha > Products > Security > Marudi>Magirovuzo
Magirovu, anonziwo magirovu echinyori, mafungiro echipo, kana magirovu, inoshandiswa zvikuru nokuda kwokudzivirira michindwe yavashandisi pazvinhu zvakapinza. Nenguva dzose, magirovuzi anogadzirwa nesimbi asina mvura. Nepo panguva ino, kugutsa zvinodikanwa zvavatengi, tinogonawo kugadzira magirovus echipinzaniso ine muhondo wetehwe unofadza. Chii chimwe, magirovu matsva okugadzira zvinhu ane mutengo unochinjika unochinjika uye mugadziro wemvura inogona kukodzerawo nokuda kwamaoko vatengi vazhinjisa ndokurei vatengi vanonzwa vakanaka zvikuru. Mangirovu dzechainmail kazhinji kazhinji dzinogadzirwa nezvindori zvesimbi zvakakwirira zvinoratidzira kudzivisa kwakachekwa nokudzivisa kwokurwa. Nokudaro, magirovuzi anoshandiswa zvakawanda semagirovusa okuchengeta uye magirovus oyster.
SS girove ine chipof
LMashoko:Carbon simbi, simbi risina simba, aluminium yakajeka, anodized aluminium, titanium, brass, mhangura, nhare, nj.Zvinhu Zvinhu
LNzira yokubatanidza: Riveting, butting and welding.
LMutoo wemabani: European 4 mu1
LKurapa: Bunzi yezinc, mapfundiro omutema, mhangura.
LUkuru hwepanhandzi yechainmail: XXS, XS, S, M, L, XL, inogonawo kuitwa.
LRudzi rwunoita manhanduro.
2. Imwe nhatu ine mvura.
3. Imwe inotadza, kureba kwomooko.
4 Imwe mishanu ine kutsvaka uye urefu hwekufu hunogona kuitwa.
5. Mutengi wokutarisira.
LKuswedzera zvinhu zvokudya:Polypropylene, nylon, simbi risina simba kana kuti rinogona kuitwa.
LRuvara rukuru rwakatesa: Chichena, chitsvuku, chisvibyo, chibhuruu, chikara, chirwere, nj.
LKusvitsa / muitimiro wekufu:Zvinotsiva.
LMashoko okuwedza: Diameter yenyaya nechinyanya chinogona kuchinja.
SS Chainmail glove mukurwisa
SS Chainmail glove mukurwisa banga
Tes ine runwe rutatu, glove tes
Kuongorora zvinhu zvinoitwa neSS
L zvinhu zvinorwisana nezvokura.Zvinhu zvinoshandiswa zvesimbi zvisina simba
Ini simba guru uye chivako chakasimba.
Ine zvinhu zvinochinjika uye zvinorema.
Ndakafadza kupfeka gadziriro.
Ndiko kuchengetwa chiduku..
L Reversible yakapfeka.
Ndi zvimwe zvisarudzo zvekusarudza.
SS girove yakakodzerwa nokuda kwerusindani
SS girove yakakodzera kuuraya
Kushandiswa kwesimbi isina simu
L kicheni yemhuri.
L Restaurant kicheni.
Kugadzira zvinhu zvemabasa okugadzira.
L Bherabhoratory edzi.
Ndi chengeteko yavose.
Mbiri:Kuchengeta michina yesimbi kwakawedzerwa
Tevere:Mwenzi wetambo yesimbi isina simba
Taga: chainmail gloves, chain mail gloves, anti-cut gloves,
Kurondedzerwa kwemagirovuzi mvura
Zvimwe zvemagirovu dzinorwisa
Nheyo yokusarudza yemagirovu dzokutsamba